ဆန်နီနေမင်း: ဒီခေါင်းစဉ်လေး ရခဲ့တယ်
1. A comparative study of the Buddhist ordinations between Sri Lanka and Myanmar.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဇင်ဘာ(၁၀)ရက်နေ့မှာတော့ ကျောင်းအပ်ရတော့မယ်။ ကျောင်းအပ်ရရင် ကျောင်းကြေးက ဘယ်လိုသွင်းရမလဲလို့ ငွေလက်ခံတဲ့ ဆရာတစ်ယောက်ကို သွားမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ M.phil က တစ်နှစ်ကို USD (900) Ph.D က တစ်နှစ်ကို USD (1000) တဲ့။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာက M.phil တန်းကို (၂)နှစ်၊ Ph.D တန်းကို (၃)နှစ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ တကယ်လို့ မိမိက M.phil ကျမ်းရေးတဲ့အခါ ကျမ်းခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သတ်တာကို လိုရင်းအချက်တွေ၊ အတွေးခေါ်အသစ်တွေ တစ်နှစ်အတွင်း များများတင်ပြပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နှစ်တည်းနဲ့ M.phil တန်းကို Upgrade လုပ်ပြီး အဆင့်ကျော်တတ်ကာ Ph.D တန်းကို တက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ M.phil ဘွဲ့တော့ မရတော့ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပြင် Ph.D ကျမ်းရေးတဲ့အခါ သုံးနှစ်နဲ့မပြီးဘူးဆိုရင် တစ်နှစ်သက်တမ်းထပ်တိုးပေးပါတယ်။ များသောအားဖြင့်လည်း သက်တမ်းတိုးယူကြရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သုံးနှစ်အတွင်းမှာ ကျမ်းရေးတဲ့အခါ ကျမ်းဟာပြည့်စုံလုံလောက်မှုမဖြစ်တာရယ်။ တက္ကသိုလ်က ဆရာအားလုံးရဲ့ စိတ်ကြိုက်မဖြစ်တာရယ်ကြောင့် တစ်နှစ်ဖြစ်စေ၊ ခြောက်လဖြစ်စေ သက်တမ်းတိုး ယူကြရပါတယ်။ ဒါက ဦးဇင်းသိသလောက်အတွေ့အကြုံများကို သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာ ဒေါက်တာလုပ်ချင်သူများပါသိရအောင် တင်ပြပေးတာပါ။
အဲဒီတော့ ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိသတ်များလည်း ဦးဇင်းကျမ်းခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်စာတမ်းများဖြစ်စေ၊ ၀က်ဆိုဒ်လေးများဖြစ်စေ ရှာဖွေတွေ့ရှိကြမယ်ဆိုရင် ဦးဇင်းဆီကို ပို့ပေးရင်တော့ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဦးဇင်းအတွက် ၀ိုင်းဝန်းရှာဖွေပေးပါက အချိန်အားလပ်ချိန်ရရင် ကျန်တဲ့စာတွေ ရေးလို့ရတာပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် စာအုပ်များတွေ့ရှိပါက စာတိုက်ကနေ ပို့ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့လေ။ ဦးဇင်းအရင် ဒီမှာဒေါက်တာလုပ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ပါး ပြောတာကတော့ မင့် ဒီကစာအုပ်တွေကို ရှာရ၀ယ်ရတာနဲ့ကို ဒေါ်လာ(၁၀၀၀)လောက်တော့ ကုန်မယ်တဲ့။ ဒါဟာ မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေ မပါသေးဘူးတဲ့။ တချို့စာအုပ်တွေကို အွန်လိုင်းကနေ ၀ယ်ရမယ်တဲ့။ နောက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကနေလည်း ၀ယ်ရမယ်တဲ့လေ။ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး စာအုပ်တွေစုသယ်ခဲ့ရဦးမယ်တဲ့။ အင်း ဖြစ်လာမှတော့ ဘယ်တက်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဖြစ်သမျှအကြောင်း အကောင်းချည်းပဲလို့တွေးပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ရတော့မှာပေါ့လေ။ ခုတော့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ဦးဇင်းအတွေ့အကြုံများကို ရပ်နားထားပြီး နောက်မှဆက်လက်တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ဦးဇင်းစာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံးလည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြီး လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝကြကာ ပန်းတိုင်ကို လျင်မြန်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလျက်……။
တပည့်တော်တို့ ထံက အသောက ကျောင်းတိုက်၏ ဆိုဒ်ထဲမှာတော့ စာအုပ်တခုရှိပါတယ်။ ဆရာတော် အတွက် သင့်ပါက ဒေါင်းယူနိုင်ပါ သည်ဘုရား။
စာအုပ်ကတော့ ဆစ်ဒနီမြို့၊ ယနောရာ မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၏ သြဝါဒစရိယ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဇာဂရာဘိဝံသ (သ၊စ၊အ၊ဓမ္မာစရိယ-သိရောမဏိ) M.A.(Pali),PhD အဂ္ဂဟာပဏ္ဍိတ၏ 1967 ခုနှစ်တွင် စတင် ပုံနိတ်ထုတ်ဝေ ခဲ့သော အိန္ဒိယ စာပေသမိုင်း – History of Indian literature ဖြစ်ပါသည်။